Kuyatholakala Ukufakwa kweXfce 4.10pre2 + | Kusuka kuLinux
Ukutholakala kwe-Xfce 4.10pre2 +
Kusukela ngoLwesihlanu olwedlule besitholile ifayela le- Inguqulo ye-Xfce 4.10pre2, isondela kakhulu kuhlobo lokugcina lwenhlanhla yabasebenzisi balokhu Imvelo yedeskithophu, kanjalo nokuhambisana nohlelo lwentuthuko.
Le nguqulo entsha ifaka amaphakheji alandelayo:
Isikhathi se-xfce4 4.9.1
Ukuthuthuka okuningi kufakiwe, esingakubona ku- lesi sixhumanisi. Lokhu kukhishwa kufaka ezinye izinto ezintsha njengokuphendula okuthuthukile kokusebenza kwefayela ku- IThunar, kanye nokwenza ngcono iTiling in Img4. Konke okunye ukulungiswa kweziphazamiso nezibuyekezo zokuhumusha.
Amafayela angalandwa ngawodwana kulesi sixhumanisi:
Yize ngincoma ukulanda ifayela elicindezelwe nakho konke okufakwe kulesi sixhumanisi:
Uma unesibindi sokuhlanganisa, ku Ukuhlolwa kwe-Debian Ngikwenze ngempumelelo ngisebenzisa lo mbhalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Ukutholakala kwe-Xfce 4.10pre2 +
Angiqondi ukuthi kungani uhlangana nokuhlolwa kwe-debian, bekungeke yini kube ngcono ukwenza ukuphina kahle nokubamba amaphakheji angaguquki we-debian ???
Ngikuthola kungazinzile kakhulu ukuhlanganisa amaphakheji athile ku-beta, kunokuba ngibambe amaphakheji we-debian engazinzile, kepha kukhona wonke umuntu ophambanayo onetimu
Ngabe lawa maphakeji awangenanga kunoma iyiphi ikhosombe le- Debian.. Futhi khumbula okuthile, izikhathi eziningi iqiniso lokuthi iphakethe X alikho Debian Akungenxa yokuthi ayizinzile, kodwa ngoba ayizange ihlolwe kuzo zonke izakhiwo. Ngisebenzisa I-Xfce 4.10pre2 kusukela pre1 futhi angikaze ngikubone ukungazinzi.
Futhi ayingeni nefilosofi yokuthi kufanele ngihlanganise amaphakheji, woza, izikhathi engizisebenzisile akubonanga kimi ukuthi yi-distro yokuhlanganisa, kungenzeka nginephutha kepha angazi, kunginike lowo muzwa
Impela akuyona ifilosofi, kepha kulokhu angikwazi ukulinda I-Xfce 4.10 ngena ezinqolobaneni, ngakho ukuzihlanganisa ukuphela kwendlela engishiyelwe yona. Nokho, ngiyakutshela, akwenzeki lutho, konke kuziphatha ngendlela efanele.
I-NOMAS izobe ilahlekile ngalokho okudingekayo ukwenza inguqulo entsha esehluleka manje
Yize abathuthukisi bayo kwesinye isikhathi bevaliwe ngandlela thile, ngiwuthanda kakhulu umsebenzi abawenzile Xfce. Kuyiqiniso, babambezele okwabo, kepha uma sibheka ukuthi bambalwa nokuthi isikhathi abasinikela XfceYiyo kuphela abanayo mahhala, ngoba abanakusolwa nganoma yini, empeleni.
Mhlawumbe ukube bekulula futhi kuyimodemu njenge-lxde, bengizozama
Ngoba nakanjani awekho ku-Unstable noma ku-Experimental okwamanje.
Futhi angiqondi ukuthi kungani usebenzisa i-debian, ngokuzinza kwayo ???
Sula ukuhlanganisa amaphakheji we-beta kuyazinza ****
Woza, akekho ofayo ukuhlanganisa i-BETAS. Uma uvivinywa i-Debian noma ungazinzile, akukhona ukuthi ukhathalela kakhulu ukuzinza, uma ufuna ukuthi uzohlala esitebeleni.
Lapho ngisebenzisa iDebian kaningi kwakudinga ukuhlanganiswa ngoba ngangidinga okuthile okwakungekho kuma-repos, njenge-pnmixer ye-xfce eyasindisa impilo yami ngodaba lokulawulwa kwevolumu. Noma i-mednafen sula ukwenza ukugenca kwe-rom ku-linux. Ngikhumbula futhi i-zdoom ngoba ayikho inguqulo ye-Debian.
Noma kunjalo, futhi uma sikhuluma nge-BETA, ukuyivivinya kukulo noma ngubani oyifunayo. Uma okuthile kwephuka, nakanjani kunesixazululo.
Xfce kuhle lokho? Ngine-Arch + MATE, kepha uyipenda kanjani kahle…. hehe
Uma ufuna i-pc yakho indize, zama i-lxde noma i-openbox
Izimpukane zami ze-debian ezine-XFCE zisebenzisa kuphela i-100mb ebhuthini.
futhi ngine-2 gb enginayo inqama engingayisebenzisa.
Ikuqedela u-100mb, ifuna isithombe
Cabanga kahle ukuthi, nge-1Gb ye-RAM, iqala ku-79Mb 😀
UMATE ungidla nge-100 MB futhi, ngizozama i-xfce ebukeka yinhle.
Kufanele uzame 😀
elav <° Linux Nginombuzo .. kungani ezinye izinhlobo zakamuva ze-kernel zihlala ziletha ukukhubazeka ngomsindo?
Ngikubuza lokhu ngoba ngizamile i-fedora futhi i-fedora ingenye yama-distros ahlala esesikhathini ne-kernel .. lena enguqulweni yayo yamanje .. futhi ibinenkinga yomsindo ukuthi inomphumela womsindo kuphela emachwebeni angemuva we-pc yami nasemachwebeni angaphambili lapho ngixhuma khona ama-headphone bengingenawo umsindo ophumayo.
ngibe sengizama ukuhlolwa kwe-debian futhi kwenzeka into efanayo ..
bese uzama i-beta 2 ye-ubuntu 12.04 .. futhi igcine inkinga efanayo
kepha ezinhlotsheni ezizinzile ze-ubuntu / mint ayinginiki nkinga ..
Ngiqondise .. ngitshele ukuthi kungani lokhu kwenzeka?
Angazi nhlobo. Ngokushintsha ngakunye kwe-Kernel, izinto ziyangezwa noma ziyasuswa ezingathinta izinhlobo ezithile ze-Hardware.
Okwakho kubukeka njengenkinga ye-alsa kunenkinga yokushaya kwenhliziyo, kufanele ubone ukumiswa kwe-alsa kepha kuyefana njalonjalo, bambalwa kakhulu abantu abakuqondayo lokho ...
futhi ngingabona kuphi ukumiswa kwe-alsa?
uma uqonde ukuthi uma uvula i-terminal bese ufaka i- "alsamixer" bengivele ngiyenzile futhi ayingisebenzelanga
Ungabona ukuthi ngabe i-alsa ikuphakamisela ama-codec:
ikati / proc / asound / ikhadi * / codec * | grep Codec
Uma ibhodi lakho livela ohlwini, hlola ukuthi amamojula alayishwe ku:
ikati / proc / asound / modules
Angicabangi ukuthi isebenzisa ama-300 mb kumakhompyutha wanamuhla, ithi min 16Gb.
Uma unenqama eningi, usebenzisa kakhulu, ngakho-ke into enengqondo ukuqhathanisa ukusetshenziswa kwezinqama kuleyo nqama efanayo.
Yiziphi izindaba ezinhle empeleni engizenzayo manje kepha ngisebenzisa inguqulo 4.8 Kepha ngizozama 4.10
@elav, ingabe iSkripthi sisebenza ku-Debian AMD64 futhi?
Ndoda, angikaze ngiqoqele ama-Bits angama-64 .. Ngicabanga ukuthi kufanele kusize ukungeza amanye AMAFLAKHI, ngethemba ukuthi i-Proper isula ukungabaza ^^
Empeleni i- ./configure Ithola isistimu yakho ngakho-ke iyilungiselela ukuhlanganisela ukwakhiwa okutholakalayo inqobo nje uma ikhodi ivumela ukuhlanganiswa ngamabhithi angama-64, okwamanje okuvumela wonke amakhodi, lokhu ngokuvamile kwehlulekile kuma-emulators amadala ngoba ingxenye yawo ikhodi ibihlanganisiwe noma enye ikhodi engalungiselelwe.
Ukusetshenziswa okuhehayo ku-debian + xfce, ngicabanga ukuthi ku-lxde ukusetshenziswa kuzoba kuncane noma kufane okufanayo ???
Ukusetshenziswa kwe-lxde kuncane, kungani uqamba amanga. Inokuncika okumbalwa futhi isebenza ngamaphakeji ambalwa. Inokunye ukushiyeka abaningi abakuthola kukhanga ku-XFCE nakwezinye eziwusizo kakhulu, kepha lokho kungaxazululwa ngaphandle ku-LXDE. Noma kunjalo, kungumbuzo wezinzuzo ezithile. Ngine-PC ebhenka iCinnamon ngaphandle kwezinkinga, ene-3 GB DDR3, kepha angizukuyinika imemori engaphezulu kwama-megabytes angama-700 ekuqaleni nasefayilini !!!!! Ngenkathi i-XFCE ihlelwe ngokwengeziwe okuningana engikusebenzisayo, njenge-libreoffice elayishwe kuqala kwimemori, i-pnmixer nokuningi akufinyeleli kuma-300 ekuqaleni. 300, ngoba nginezinto eziningi engizilayishayo ekuqaleni kanye nezinto ezimbalwa ezibhaliwe. I-LXDE ayikaze iqhathanise ekusetshenzisweni.
Nakhu ngikushiya my I-Debian + Xfce uma iseshini isiqalile.
Khohlwa, ngenani lezinto engizilayishayo ekuqaleni namademoni avulekile angisoze ngaba nomthwalo ophansi kangako. Uma noma uma ngidinga i-libreoffice ukuze ngiphakamise ngokushesha imibhalo namafomu. Ngakolunye uhlangothi ngisebenzisa isamba ukufa nokulayisha amasheya ekuqaleni, ngaphandle komculo wami ngiyafa. I-NetworkManager ingusathane ngoba ngezikhathi ezithile ngiphendukela kumakhalekhukhwini nakubuchwepheshe bayo obubi ngokweqile be-3g (ngiyabonga uClaro wase-Argentina ngomsebenzi wakho ongemuhle). Nezinye izinto ezimbalwa. Ngicabanga ukuthi kungiqala ngama-278, kepha futhi masikubheke ukuthi ukukhulisa amasheya e-samba ngaphansi kwe-. Noma kunjalo, angikhonondi, yizinto engizidinga YEBO noma YEBO.
Kuyiqiniso ukuthi ekuqaleni ngithatha izinto ezimbalwa ^^, kepha ngize ngiqale ngo-278Mb kusasetshenziswa kakhulu kakhulu kumakhompyutha akhona njengamanje.
Kulungile, yilokho ebengikhuluma ngakho, ngenani lezinsizakalo engizisebenzisayo, kepha i-libreoffice engiyibekele ukusebenzisa inkumbulo ethe xaxa iphansi kakhulu. Uma kuqhathaniswa ne-CInnamon, isibonelo. Lapho nje ngibona ukusetshenziswa, ngangihlaselwa.
Abantu beXubuntu bangalinda futhi babambezele ukukhishwa kwayo kancane ukuze basebenzise iXfce 4.10. Yini ukusetshenziswa kokwethula i-Xubuntu ngosuku olufanayo no-Ubuntu?
Yize nginesifiso esikhulu sokuhlola i-XFCE 4.10, ngicabanga ukuthi ngizolinda kuze kwethulwe ngokusemthethweni. Ngiwahlonipha kakhulu ama-betas.
Isinqumo esihlakaniphile 😀
Yebo, uma cishe yonke into kufanele ilungiswe iziphazamiso, angiboni ukuthi kungani ungalindeli ukukhishwa
U-Elav, ngiyakuqinisekisa, abathuthukisi ngokwabo bafaka isihlukanisi esingabonakali futhi esandisiwe kuphaneli ukuhlukanisa uhlu lokuthengisa nokuthi izithonjana ezingakwesokudla zikuleyo ndawo. Uma ngingahle, futhi ngichaze i-nono yami, isisombululo esibuwula kakhulu.
UThunar uyaqhubeka ngaphandle kwamathebhu kanye / noma ekhombisa amafolda amabili noma ngaphezulu ewindini elifanayo. Kuyamangaza kanjani ... uma kubonakala ngathi "kuvaliwe" njengoba usho onjiniyela be-xfce. Ngicabanga ukuthi othile kufanele ukuthi uzenzele lezi zinsiza ze-thunar, noma mhlawumbe zikhona futhi awukaphawuli ngazo. Uma unolwazi ngakho, ngiyabonga ngoba ngisebenzisa lo mlawuli.
Bebengahleleli ukungeza amathebhu kwiThunar, okungenani kulokhu kukhishwa.
Futhi kuzoqhubeka ngaphandle kwamathebhu. Okwamanje onjiniyela be Xfce banakho lokho kucace bha. Ngikhumbula ngibona enkundleni Xfce kumsebenzisi othe uzokwenzela iThabbed Fork, kepha akezwakala kusuka. Mhlawumbe wathunjwa yi-mafia yaseRussia, waqashwa ngabathuthukisi be Xfce, ukuze kungakhombisi lokho IThunar ngamathebhu, kuhlala kukhanya. 😛
I-PCMan iyisibonelo salokhu, ukusekelwa kokufinyelela kwenethiwekhi, amathebhu, ukuphatha kahle izithupha futhi akuyekanga ukukhanya okukhulu.
I-Andale, 4.10 isiphumile manje xfce.org/about/news/?post=1335571200
Isihlungi se-Anti-Hoygan samabhulogi